Boende (Somali) : Östra Göinge kommun
Startsida Stöd Så jobbar vi med integration Boende Boende (Somali)
Guri helidda muddada geedi socodka magangalyo
Xaaladdaada guri helidda muddada wakhtiga magangalyo waxay sidoo kale xaqiijin xaaladdaada guri helidda kadib marka lagu siiyo sharciga dhaganaanshaha. Caawinta dhaqaale ee la siiyo magangalyo doonayaasha waxaa saameyn ku yeelan nooca xaadirka ee guri heliddood. Kala xiriir wixii xog dheeri ah Qaybta Qaabiladda Migrationsverket [Hay’dda Socdaalka Iswiidhishka (Swedish Migration Agency)] taasood iska diiwaangalisay.
Guri helidda ee Migrationsverket
Migrationsverket waxay dhagaysataa kiisaska magangalyo. Haddii aad tahay magangalyo doon baahi u qaba guri helidda muddada geeddi socodka magangalyo, Migrationsverket way ku siin kartaa. Migrationsverket waxay ku siin doontaa guri ku meelgaar ah mar alaala markay baahi jirto. Haddii aad hawada ka baxsantahay sidaa darteed Migrationsverket kulama soo xiriiri karto, waxaa lagaa saari doonaa nidaamka sugidda, xuquuqdaada guri heliddana waa la joojin doonaa.
Ma dooran kartid meesha aad dagayso waana in laguu diyaariyo inaad u guurto meel ay jirto guri banaan. Haddii ay jirto guri yaraan, waxaad sidoo kale u guuri kartaa guri cusub inta aad ka sugayso go’aan. Nooca guri helidda way kala duwanaan kartaa xarun deegaan balaaran ilaa guri yar.
Guri helidda iskaa
Haddii aad doorato inaad habayso guri iskaa ah muddada geedi socodka magangalyo waxaad masuul ka noqon kharashaadka guri. Haddii, sabab uun, aadan awoodin inaad sii daganaato guriga aad laftirkaagu habaysatay waxaad u guuri kartaa mid ka mid ah xarumaha Migrationsverket meeshaas oo nifaas jiro.
Haddii aad doorato guri helidda ay bixiso Migrationsverket ama aad u habaysato iskaa, waa in ay ku heli karto Migrationsverket si ay kuula soo xiriirto. Xasuusnaw inaad u sheegto Qaybta Qaabilaadda (Reception Unit ) ciwaankaaga cusub haddii aad guurto muddada wakhtiga sugiddaada.
Guri helidda haddii lagu siiyay sharciga daganaanshaha
Sida qaxooti ama qof kale u baahan difaac kaasoo la siiyay sharciga daganaanshaha, ayadoo la raacayo shuruudo dhawr ah ee Xeerka Galtida (utlänningslagen) (2005:716), adiga iyo qaraabadaada waxaa u adeegi Bosättningslagen (samaynta u qaabilaadda xoogaa muhaajiriin dhawaan yimid dajin). Xeerka wuxuu dabakhaa kuwa ku jira xarumaha deegaanka iyo qaxootiga la ogolyahay. Xeerka micnahiisu waa in dhamaan maamulada Iswiidhan ay leeyihiin masuuliyadda inay aqbalaan dadka dhawaan yimid ee loo qoondeeyay dajinta. Ujeedada Bosättningslagen waa in la hormariyo fursadaha dadka dhawaan yimid inay dhexgalaan bulshada.
Maamulada waxay leeyihiin shuruudo kala duwan
Dhawr dadka dhawaan yimid maamul kasta wuu aqbali doonaa ayadoo ay ku xirantahay tirada, xaaladda suuqa shaqo, wadarta tirada dadka dhawaan yimid iyo carruurta aan la wahelin iyo tirada magangalyo doonayaasha ee jooga maamulka. Qasadka dawladda waa maamulada leh suuqa shaqada wanaagsan, shacabka badan, tirada qaabilaadda yar oo leh dhawr magangalyo doonayaal inay aqbalaan dad badan oo dhawaan yimid.
Migrationsverket iyo gudiyada maamulka degmada lagu daray maamulada waxay wadaagi masuuliyadda ee dajinta ee dadka dhawaan yimid. Laga bilaabo 1 Janaayo 2017, Migrationsverket waxay qaadan doontaa dhamaan masuuliyadda qoondaynta dadka dhawaan yimid maamulka.
Waxaad kali ah ood heli doontaa hal guri bixin
U qoondaynta maamul micnaheedu waa in maamulka ay khuseyso masuuliyadda habaynta guri helidda ee adiga iyo xubnaha qoys eed la nooshahay ee xarunta deegaanka. Siinta guri helidda waxay ka imaan kartaa maamul kasta ee Iswiidhan, taasoo micnaheedu yahay in lagaa siin karo guri helidda maamul ka duwan kan aad joogto. Tani micnaheedu waa in aadan awoodin inaad doorato meesha lagaa siin doono guri. Waad aqbali kartaa ama diidi siinta guri helidda. Waxaad kali ah ood heli doontaa hal siin. Haddii aad doorato inaad diido, waa inaad ka baxdaa guri helidda Migrationsverket meesha aad joogto si loogu baneeyo magangalyo doonayaasha kale, mana ku jiri doontid kiiska dajinta.
Haddii aad ku nooshahay guri iskaa ah muddada wakhtiga magangalyo, kuma adeegayso Bosättningslagen marka lagu siiyo sharciga daganaanshaha sidaa darteedna laguuma qoondayn karo maamul. Haddii laguu siiyo sharciga daganaanshaha ujeedooyin shaqo, waa inaad habaysato guri iskaa ah. Haddii aad ku jirto guri helidda Migrationsverket marka lagu siiyo sharciga daganaanshaha, waxaa kuu adeegi Bosättningslagen balse waxaad leedahay fursad inaad hesho guri adiga aad raadsato.
In la bixiyo guri amaan ah waa muhiim inaad isku diiwaangaliso codsade shirkadaha guri helidda, khaas iyo maamul. Iska diiwaangalinta wax ka badan hal shirkad, waxaad kordhin doontaa fursadahaaga guri helidda. Codsade ahaan waxaad muujin kartaa rabidda guryaha banaan. Waa dhawr maalmood faylidda taasoo xaqiijisa taasoo hesha madaxa kirada ee guri. Qofka leh dhibcaha faylka ugu sareeya ayaa la siin doonaa guri. 1 maalin faylka =1 dhibcaha faylka. Shirkadaha guri waxay yeelan karaan shuruuc kala duwan.
Maxaa dhaca marka aan haysto sharciga daganaanshaha iyo guri helidda labadaba?
Arbetsförmedlingen (hay’adda Shaqaalaysiinta Dadweynaha Iswiidhishka) waxay leedahay masuuliyadda isku xirka ee adiga qof dhawaan yimid ahaan iyo labadaada sano ee koobaad iska diiwaangalisay Iswiidhan. Hawsheeda waa in laguu diyaariyo suuqa shaqaalaha Iswiidhishka. Qorshaha dajinta shakhsi waxaa loo diyaarin doonaa siinta adiga hawlo kala duwan si laguu siiyo bilaabid wanaagsan ee wadadaada si aad isku caawiso:
Luuqadda Iswiidhishka waa muhiim noolasha bulsho, iyo waxbarashada Iswiidhishka (Swedish Tuition) (SFI) sidaa darteed wuxuu ku jiraa qorshaha dajinta
Hanuuniska bulsho ee luuqaddaada hooyo
Dadaalada kale in laguu diyaariyo suuqa shaqaalaha
Akhri wax badan ku saabsan barnaamijka dajinta iyo caawinta aad ka heli karto Arbetsförmedlingen ee boggeeda. Xog badan oo ku saabsan guri helidda Östra Göinge, la xiriir Inflyttningsenheten (Uguuridda Qayb)
Waxaad heli doontaa faa’iidada dajinta lagu siiyay waxaad qaadan qaybta shaqaynaysa ee hawlaha qorshaysan.
Liiska taxaalka haddii aad dhawaan timid Iswiidhan
– Ka codso kaarka ID ga Skatteverket [(Hay’adda Canshuurta Iswiidhishka (the Swedish Tax Agency)]
– Diiwaangali ciwaanka saxda ah. Ciwaankaaga diiwaangashan wuxuu xaqiijin maamulka aad ku bixin canshuurtaada, ciwaanka aad ku diri waraaqaha, ilaa meesha gaadiidka iskuul ka socdo iyo waliba cadadka deeq kasta. Waxaa jira ujeedooyin badan in la diiwaangaliyo ciwaanka saxda ah.
– Isku diiwaangali dhawr faylal guri helidda ah.
– Fur akoonti bangi. Waa muhiin in qof weyn oo kasta yeesho ama leeyahay akoonti bangi.
– Ka diiwaangali akoontigaaga bangi Försäkringskassan [Hay’adda Caymiska Bulshada Iswiidhishka (the Swedish Social Insurance Agency)] sidaa darteed lacag bixintaada waxaa lagu diri karaa toos akoontigaaga.
– Iska diiwaangali Arbetsförmedlingen si loo diyaariyo qorshaha dajinta, oo loo codsado faa’iido dajin iyo helidda dajin. Arbetsförmedlingen waxay kuu diiwaangalin doontaa hanuuniska bulsho iyo Muhaajiriinta Iswiidhishka (SFI).
– Diiwaangali carruurta iskuulka hortii iyo iskuulka.
– Haddii aad jeclaan lahayd, waxaad ka codsan kartaa amaah inaad ku iibsato alaab guri iyo alaabada kale ee muhiimka ah gurigaaga, kuwa la dhaho amaahda alaabta Guriga CSN. Waxaad codsigaaga caawin ka heli kartaa sargaalka kiiska ee maamulka.
– Ka qaybgal hawlaha bulsho sida meelaha luuqadda iyo hawlaha naadiga. La xiriir qaybta soo galidda maamulka ama qaybta raaxaysiga iyo dhaqanka wixii xog ah oo dheeri ah.
Bogga lagu talo bixin meesha aad ka heli karto xog badan
– Wixii xog dheeri ah oo ku saabsan geedi socodka magangalyo, guri helidda iyo dhaqaalaha muddada geedi socodka magangalyo, fadlan gal bogga Migrationsverket www.migrationsverket.se
– Shuruucda iyo xeerarka dajinta www.riksdagen.se
– Barnaamijka dajinta www.arbetsformedlingen.se
– Kaarka ID iyo diiwaangalinta www.skatteverket.se
– Amaahda alaabta Guriga CSN Home www.csn.se
– Sida loo diiwaangalin carruurta iskuulka hortii iyo iskuulka haddii aad dhawaan timid Iswiidhan iyo sida loo xanaanayn gurigaaga www.ostragoinge.se
Shirkadaha guri helidda:
Göingehem, shirkadda guri helidda maamul ee Östra Göinge www.goingehem.se
ABK, shirkadda guri helidda maamul ee Kristianstad www.abk.se
Hässlehem, shirkadda guri helidda maamul ee www.hasslehem.se
Bogga maamulka wuxuu ka koobanyahay xog ku saabsan mulkiilayaasha guryaha khaaska ah ee Maamulka Östra Göinge https://www.ostragoinge.se/samhalle/hyresvardar/
Kontakt Jobba hos oss Evenemangskategorier evenemang månad Turism Östra Göinge kommun Politik Kommun Samhälle Samhälle Uppleva Näringsliv Utbildning Omsorg